Global Voices teny Malagasy » Nizeria: Inona no Nolazain’ny Bilaogera Nizeriana Momba ny Fifidianana 2011? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2011 8:06 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Fifidianana, Politika
Satria efa antomotra ny Fifidianana taona 2011 ao Nizeria, nafana fo ireo tontolon'ny bilaogy hitabataba. Miresaka foana ireo bilaogera Nizeriana sady mbola mitondra adihevitra lehibe ihany koa momba ny hoavin'ny firenena.
Nanomboka ny taona vaovao tamin'ny fitsikerana ny fanapoahana baomba izay mandefa ny Nizeriana ho any amin'ny razany mialoha i Nze Sylva Ifedigbo  . Mampahonena tokoa fa mbola miseho foana ny herisetra rehefa miditra ny resaka politika ao Nizeria:
Toa tahaka ny mahafinaritra ny andro voalohany amin'ny taona. Tsy misy fisalasalana fa ny zavatra voalohany ao an-tsain'ny ankamaroan'ny Nizeriana dia ny Fifidianana ankapobeny izay voalaza fa atao amin'ny volana aprily. Ny zavatra hatao voalohany indrindra hikarakarana ity fifidianana itydia ny fisoratana ny anarana ao amin'ny lisi-pifidianana manomboka ity volana ity (janoary?). Tahaka ny ahoana moa ny fahavononanay ho amin'io andro tokana fanararaotana io? Indrisy anefa fa mbola nahodin'ireo kanosa tsy miseho endrika tamin'ny alalan'ny fanapoahana baomba tao an-tsena fiantsenan'ny reny ao Mogadishu (toby Sani Abacha) Abuja ihany ny fankalazanay ny taona vaovao .
Navelatr'i Felix Okoli  teo an-databatry ny Vaomieram-pirenena tsy miankina misahana ny fifidianana ary indrindra teo amin'ny lehibeny Attahiru Jega ny olana (antsipiriany?):
Nianjera tao Jega ny palitao hahatonga ny fifidianana Filoham-pirenena amin'ny taona 2011 sy ny Fifidianana ankapobeny hizotra tsara ka mba ho taratra mazava sy hifanaraka amin'ny hetahetam-bahoaka Nizeriana ny valim-pifidianana .
Fitsapana farany ahafaha-mitsara ny tsy fahaiza-mikarakara fifidianana azo inoana ataon'ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana ny fisoratan'ny mpifidy anarana . Nanamarina izany ny Nigerian Curiosity  :
Ny andro voalohany dia mampanontany tena sahady ny fiomanan'ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) sy ny fahaizany mandrafitra ny lisitry ny mpifidy amin'ny fotoana voafetra sy ny fikarakarany fifidianana malalaka sy marina amin'ny volana aprily.
Resaka fahamaroana ny Fifidianana. Nahatonga ny saina ny maro ny firoboroboan'ny valan-tserasera raha itodihana ny revolisiona tao Afrika Avaratra. Tsy mahagaga raha narahina tamim-pahafinaretana lehibe ny Fifidianana savaranonando. Nanoratra ity i Nnenna :
Nizeria, nanaraka ny #PDPprimaries na fifidianana savaranonando aho. Laniko tamin'ny fiandrasana, fitendrena, fisiahana an-tserasera niaraka tamina Nizeriana an'arivony manerantany ny fotoanako? Nahoana? Satria efa andalam-pandresena ho filoham-pirenena izay mandresy amin'ny #PDPprimaries . Naharitra 15 ora ny #PDPprimaries . Nambara ny ampitso maraina manodidina ny tamin'ny 7ora ny valim-pifidianana farany. Niari-tory izahay! Ny valim-pifidianana isaky ny birao tsirairay dia nandeha tao amin'ny web radio, Twitter, ary Facebook.
Nihevitra i Feathers Project  fa miavaka ny Fifidianana taona 2011 noho ny hamaroan'ireo mpanara-maso ny Fifidianana tsy miankina eto an-toerana.
…Toa zava-dehibe tokoa ny Fifidianana 2011 ka tsy avela ho an'ny mpanao politika irery ihany. Nahay niantsoroka ny lazany ho anarana mahazatra ny Vote or Quench, RSVP (Register, Select, Vote ary Protect na misoratra, mifantina, mifidy ary miaro), If Naija Votes.
ReVoDa, fampiasana am-pinday ahafahan-ny olona tsy nizatra ilay fitaovana hizara ny hitany nandritra ny fifidianana. Loharano : Gbenga Sesan blog
Gbenga Sessan  nanamarina ny tanjaky ny media sosialy tamin'ny Fifidianana izay nahitana fandrosoana tamin'ny fampiharana vaovao ny – ReVoDa izay:
mijery ireo Nizeriana 87,297,789 amin'ny alalan'ny finday, 43,982,200 amin'ny fidirana aterineto ary 2,985,680ao amin'ny Facebook tamin'ireo mpanara maso ny fifidianana tsy ara-dalàna.
Nanana soso-kevitra ho an'ny Vadin'ny Filoham-pirenena i Eurukanaija , izay miteny anglisy sarintsariny toa zary reharehan'ny firenena:
Tsy hoe ny bilaogera ihany no miresaka fa mba mihira koa ny mpanao mozika. Ny fampielezan-kevitra manentana ny olom-pirenena tamin'ny Fifidianana dia efa tonga sahady tao amin'ny aterineto ka nahafahana naneho hevitra. Trading Places  nilaza izany toy izao:
Tamin'ny Twitter, Eldeethedon, iray amin'ireo mpanao mozika maromaro, dia namporisika ny vahoaka mba “mba ho antoky ny fanovana” ary hiarovana ny safidin'ny olona .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/04/15774/
 hiarovana ny safidin'ny olona: http://www.enoughisenoughnigeria.com/